၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာပျက်မည်ဆိုခြင်းမှာ ကောလဟာလသာဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံနက္ခတ်ပညာရှင်အဖွဲ့က ကြေညာ | ဥက္ကာကိုကို
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာပျက်မည်ဆိုခြင်းမှာ ကောလဟာလသာဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံနက္ခတ်ပညာရှင်အဖွဲ့က ကြေညာ	Posted by oakkarkoko on November 13, 2009
Posted in: လတ်တလောသတင်းများ, သတင်းဆောင်းပါး.	Tagged: နက္ခတ်သတင်း.	1 Comment
လာမည့် 2012 တွင် နေနှင့် ကမ္ဘာကြားမှ နီဘရူးဂြိုဟ်ဖြတ်သန်းသွားမည့်ပုံ.... (ပုံ- နက္ခတ်အဖွဲ့)ဥက္ကာကိုကိုရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ-၆
လတ်တလောအင်တာနက်ပေါ် တွင် ပျံ့နှံ့ရေပန်းစားနေခဲ့သော လာမည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၌
ကမ္ဘာပျက် မည်ဆိုသည့် သတင်းဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်မှာ ကောလဟလသာဖြစ် ၍
နက္ခတ်ဗေဒအရ မည်သို့မှ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာမရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံနက္ခတ်ပညာရှင်များ အဖွဲ့မှ အထောက်အထားခိုင်လုံ စွာတွက်ချက်ငြင်းဆိုလိုက်သည်။
အဆိုပါ ကောလဟလသတင်း သည် အင်တာနက်ပေါ်တွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာရေပန်းစားလျက် ရှိပြီး၊ အင်တာနက်အသုံးပြုသူတို့ ၏ မေးလ်များထဲတွင်ပျံ့နှံ့နေရာ ယူထားကာအချက်အလက်ခိုင်လုံ အောင်ရေးသားထားမှုများကြောင့်တချို့သော သူများ၏စိတ်ထဲတွင် ကမ္ဘာတကယ်ပျက်တော့မည်လော ဟူသည့်စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုများ
““ဒီသတင်းဖြစ်ပေါ်လာပုံက တော့ နီဘရူး(Nibiru) အမည်ရ တဲ့
ဂြိုဟ်တစ်လုံးဟာ ၂၀၁၀၊ ဒီဇင် ဘာမှာ ကမ္ဘာနဲ့နေအကြားက ဖြတ်သန်းသွားဖို့ရှိနေတယ်။အဲဒီမှာ စိုး ရိမ်မှုလွန်ကဲတဲ့သူတွေက အဲဒီ့ဂြိုဟ်ဟာ ကမ္ဘာကြီးကို တိုက်ခိုက် လာနိုင်တယ်လို့ သံသယဖြစ်မှုကနေစတင်ခဲ့တာပါ”” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ နက္ခတ်ပညာရှင်များ အဖွဲ့မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဇေယျာကို က 7Day News သို့ပြောသည်။
နီဘရူးဂြိုဟ်သည် လာမည့် ၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာတွင် ကမ္ဘာနှင့် နေ ကြားမှအမှန်တကယ်ဖြတ်သန်း သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ နေ၊ နီဘရူးဂြိုဟ် နှင့်ကမ္ဘာဂြိုဟ်တို့တစ်တန်းတည်း ဖြစ်သည့်အချိန်တွင် နီးဘရူးဂြိုဟ် ၏ဆွဲငင်အားများက ကမ္ဘာအပေါ် သက်ရောက်ကောင်း သက်ရောက် နိုင်လိမ့်မည်ဟုသိပ္ပံပညာရှင်တချို့ က စိုးရိမ်ကြရာမှ ယခုကဲ့သို့ သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့ရခြင်းဟု
နီဘရူးဂြိုဟ်သည် အနီရောင် သဏ္ဌာန်ရှိပြီး၊ နေကိုတစ်ပတ်ပတ်
မိရန်နှစ်ပေါင်း ၃၆၀၀ ကြာမြင့်ကာ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ထက် ၁၁ ဆကြီးမား၍ ကမ္ဘာမြေမှ
ကြည့်လျှင်ကြယ်ပွင့်ပုံ စံနှင့် ရံဖန်ရံခါတွေ့ရှိနိုင်ပြီး၊ ကမ္ဘာ့တောင်ဖက်စွန်းမှ ထင်ရှားစွာမြင် နိုင်ကြောင်း သိရသည်။အဆိုပါ ဂြိုဟ်ကို ၁၉၈၃ ခု နှစ်တွင် အမေရိကန်အာကာသ သိပံ္ပ(နာဆာ)ကနီဘရူး(Nibiru) ဟူသော အမည်ကို စတင်ပေးခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘာပျက်သည့် နှစ်ကာလ များကို နက္ခတ်ဗေဒနှင့်တွက်သည့် စနစ်ရှိပြီး၊
စနစ်ဥပဒေပါဝင်သော နက္ခတ်ကျမ်းအမည်မှာ သူရိယသိဒ္ခန္တကျမ်းဖြစ်ကြောင်း
၎င်းကျမ်းအရ ကမ္ဘာပျက်မှု တွက်ချက်သည့်စနစ်တွင် ကပ်တစ်ကပ်ပြည့်လျှင်
ကမ္ဘာပျက်တတ်ကာ ကပ်တစ်ကပ်တွင် နက္ခတ်အခေါ် စတုယုဂ်ပေါင်းတစ်ထောင်ပါဝင် ပြီး၊
စတုယုဂ်တစ်ခု၏ သက်တမ်း မှာ နှစ်ပေါင်း ၄၃ သိန်း ၂ သောင်း ပါဝင်၍စတုယုဂ်သက်တမ်းတစ်ခု လျှင် ယုဂ်လေးပါးဖြင့် ထပ်မံခွဲ ထွက်ကြောင်းအောက်ပါအတိုင်း သိရသည်။
(၁) ကတယုဂ်(Golden Age)-နှစ်ပေါင်း -၁၇၂၈၀၀၀၊ (၂) တြေတယုဂ်(Silver
Age)-နှစ် ပေါင်း-၁၂၉၆၀၀၀၊ (၃) ဒွါပရယုဂ် (Brazen
Age)-နှစ်ပေါင်း-၈၆၄၀၀၀၊ (၄) ကလိယုဂ် (Iron Age)-နှစ်ပေါင်း-၄၃၂၀၀၀
ဘဒ္ဒကမ္ဘာဟုခေါ်တွင်သော လက်ရှိကမ္ဘာမြေသည် ကလိယုဂ် တွင်ရောက်ရှိနေပြီး
ကလိယုဂ် သည် ခရစ်တော်မပေါ်မီ ဘီစီ ၃၁၀၁ နှစ်တွင် စတင်ခဲ့ကာ ယခု
ခရစ်တော်ပေါ်ပြီး အေဒီ ၂၀၁၀ ကို ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သောကြောင့် နှစ်ပေါင်း
၅၁၁၁ ခုနှစ်ကို ကျော် ဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်၍ လက်ကျန်နှစ် ပေါင်း ၄၂၆၈၈၉ နှစ်ကျန်ရှိနေ သေးကြောင်း နက္ခတ်ပညာရှင်များ ကအဆိုအရ သိရသည်။
““ကမ္ဘာအနေနဲ့ ကလိယုဂ် ကုန်ရင် ကတယုဂ်ကပြန်စတယ်။ ပြန်စတဲ့အချိန်မှာ
ဘုရားပွင့်တာ မျိုး၊ လူ့သမိုင်းကြောင်း ပြန်စတာ မျိုးတွေဖြစ်ကောင်း
ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကမ္ဘာပျက်ဖို့ နှစ်ပေါင်း ၄ သိန်း ကျော်ကျန်သေးတယ်။ ဘုရား
ဟောအရလည်း လက်ရှိကာလမှာ ကမ္ဘာမပျက်နိုင်သေးပါဘူး။ နီဘရူး ဂြိုဟ်က ကမ္ဘာကို
၀င်မတိုက်နိုင်တဲ့ အပြင် ပြင်းထန်တဲ့ဘေးအန္တရာယ် ပေါ်နိုင်ဖို့အလွန်နည်းပါးပါတယ်”” ဟု ဦးဇေယျာကိုက ပြောသည်။
နက္ခတ်ပညာရှင်များအနေ ဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၂၀၀ ကျော်၏
တိုင်းပြည်တည်ထောင် သည့် ဇာတာ၊ လွတ်လပ်ရေးရယူ သည့် ဇာတာတို့ဖြင့်ဆန်းစစ်တွက်ချက်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ လာမည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာပျက်မည်ဟုဆိုခြင်းမှာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ကြောင်းနှင့် ချွင်း ချက်အနေဖြင့် ၂၀၁၂ တွင်
အင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့၏ စစ်မက်ရေး ရာပြဿနာများသာ ပေါ်ပေါက်
← အတွေးမီးခိုးများ	ဟင်းဖတ်မရတဲ့မျက်နှာ →	One comment on “၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာပျက်မည်ဆိုခြင်းမှာ ကောလဟာလသာဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံနက္ခတ်ပညာရှင်အဖွဲ့က ကြေညာ”
မိုးမောင် on November 17, 2009 at 6:54 am said:
သြော်… ဆန်ဈာဏီဗိုကြီးရဲ့ ဟောချက်ပြောချက်တွေ လွမ်းမောဖွယ်ပါပဲလားနော်.. :D